Tube ogologo: 6m / 8m
Tube n'obosara: 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
Laser ike: 1000w 1500w 2000w 2500w 3000w 4000w
Laser isi: IPG / nLight eriri laser generator
CNC njikwa: Germany PA HI8000
Na ọdabara tube ụdị: Now tube, square tube, akụkụ anọ tube, oval tube, D ekara ígwè, T ekara ígwè, H ekara ígwè, ọwa ígwè, n'akuku ígwè, wdg
Na ọdabara ihe: igwe anaghị agba nchara, carbon ígwè, galvanized ígwè, ọla kọpa, aluminum, ọla, alloy, wdg
Ịdị No .: P2060
Oke loading ibu: 25kg / m
Tube n'obosara: 20-200mm
Tube ogologo: 6000mm
P2060 / P3080 tube laser ọnwụ igwe arụpụta elu mma akụkụ na a dịgasị iche iche nke shapes na nha. Site na iji ya eriri laser ọnwụ technology, multiple Filiks nwere ike ikpokọta n'ime otu igwe. Ebe ọ bụ na ọtụtụ akụkụ chọrọ otutu usoro, dị ka ọdịnala sawing, mkpọpu ala, machining, punching na osise, P2060 / P3080 tube eriri laser ọnwụ igwe nwere ike ịrụ niile nke ndị a Filiks na otu igwe.
The laser tube ọnwụ igwe na-onwem na a ntuziaka Loader na awade tube na ọrụ onye ga-edebe tube n'ime igwe na aka ikesiike na Chuck. Na ijikọta a niile Filiks n'ime otu igwe azọpụta oge na-eri mgbe nhazi akpa na nnukwu batches ma ígwè ọrụ egosipụta na-enye ohere ka onye ọrụ na-adị mfe ime ka prototypes ma ọ bụ obere ogbe mmepụta.
Nke a tube laser cutter nwekwara utilizes elu ọsọ servos maka ngwa ma kpọmkwem n'ọnọdu nke mbelata oge nke na-abụghị uru kwukwara mmegharị. Ndị a High ọsọ servos na njikọ na ndị dị ike eriri laser nwere ike ibelata akụkụ ịcha ugboro ma na-amụba mmepụta ohere maka a elu nloghachi na ego maka ọgwụgwụ onye ọrụ.
Nke a laser tube cutter na-onwem na a zuru Herọd iji hụ na ọrụ dị mma mgbe igwe na-arụ ọrụ.
Golden laser ga-enye zuru ọrụ ma na-akwado anyị laser igwe , gụnyere a full ngwaahịa nke akụkụ ahụ mapụtara na mmiri iji hụ na anyị na ndị ahịa na-enweta akụkụ ndochi ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
Tube laser ọnwụ igwe atụmatụ
Chuck na kemeghi mwekota support n'ibuli ngwaọrụ Echekwara udia oge, hụ concentricity, gbochie anwụrụ swinging.
Automatic ịgụ isiokwu
Automatic ịgụ isiokwu tube.
Akpaghị aka Chọta Center
Dịkwuo arụpụtaghị, ekwe nkwa ngwaahịa àgwà.
Mark akụkụ na track ọnwụ.
Nkuku Fast Cutting System
Fast nkuku nzaghachi, budata rụọ ịcha arụmọrụ.
Kpatụ Speed ​​akpaghị aka
Na ọnọdụ nke ngwa ngwa ọnwụ, ọ nwere ike isi nweta adigide ọnwụ mma.
Zọpụta oru na gbochie workpiece si na-kpụchara akpụcha.
The ụwa si eduga eriri laser resonator na electronic components iji hụ igwe elu kwụsie ike.
Advanced Chuck clamping usoro
Chuck center onwe-imezi, na-akpaghị aka-eji na clamping ike dị ka profaịlụ nkọwa iji hụ na mkpa tube na-adịghị mebiri emebi.
Dual ebumnobi chucks na-dakọtara na a dịgasị iche iche nke ọkpọkọ dịghị mkpa na-eji dochie ma ọ bụ ịgbanwe jaws.
Long strok mwekota. Mgbe anwụrụ n'obosara na-sitere n'ime 100mm, ọ dịghị mkpa ka ịhazie mwekota.
Multi-axis (udia axis, Chuck adiana axis na laser ọnwụ isi) linkage n'oge ije nke ọnwụ isi.
Automatic ikpokọta ngwaọrụ
The sere n'elu support ngwaọrụ nakọtara okokụre ọkpọkọ na-akpaghị aka.
The sere n'elu support-achịkwa site servo moto na ya nwere ike ịgbanwe support ebe dị ka anwụrụ n'obosara ngwa ngwa.
The sere n'elu panel support nwere ike jide nnukwu dayameta anwụrụ tightly.
Automatic sere n'elu Support
Dị ka mgbanwe nke anwụrụ àgwà, nkwado elu nwere ike na-akpaghị aka gbanwee na ozugbo iji hụ na ala nke anwụrụ bụ mgbe atọsa si n'elu nke support aro, nke na-arụ ọrụ nke dynamically akwado ọjà.
Ịgbado ọkụ onuete njirimara
The ịgbado ọkụ onuete ọnọdụ nke anwụrụ nwere ike mata iji hụ na ọnwụ ọnọdụ ezere ịgbado ọkụ onuete n'oge nhazi ma zere nsogbu nke ọgbụgba ọkụ oghere na ịgbado ọkụ onuete.
N'ihi na kpebisiri na oruru ọjà, akpaka mgbazi na ọrụ nwere ike na-aghọta na segmented ihu search, na-akpaghị aka idozi ndiiche chọta n'etiti ebe nke curved anwụrụ n'ihi na ọnwụ iji hụ na ọnwụ nkenke.
Mgbe ịcha na akụkụ ikpeazụ nke tube, n'ihu Chuck jaws na-akpaghị aka na-emeghe, na n'azụ Chuck jaws gabiga n'ihu Chuck iji belata ịcha ìsì ebe.
Tube n'obosara erughị 100 mm na wastage ihe 50-80 mm
Tube n'obosara karịa 100 mm na wastage ihe 180-200 mm
Nhọrọ - nke atọ axis nhicha n'ime mgbidi ngwaọrụ
N'ihi na laser ọnwụ usoro, slag ga-apụghị izere ezere-rube isi a akụkụ nke dị n'ime mgbidi nke na-abụghị ọjà. Karịsịa, ụfọdụ ọkpọkọ na nta diameters ga-enwe ihe slag. N'ihi na ụfọdụ ọzọ achọ ngwa, nke-atọ aro anata ngwaọrụ ike-atụkwasịkwara gbochie slag ibi na n'ime mgbidi.
Tube laser ọnwụ igwe software
German PA akara software
Otu page enwezu niile arụmọrụ ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi!
Ngwa ngwa hazie interface, ihe adaba!
Tinye otu nọọrọ onwe ha nchoputa interface ngwa ngwa troubleshoot na-na saịtị nsogbu, ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi!
Lantek Flex3d akwado a dịgasị iche iche nke anwụrụ ụdị
Standard tube ụdị: Now tube, square tube, Ob-ụdị tube, D-ụdị tube, triangle tube, oval tube, wdg
Na pụrụ iche ekara anwụrụ nke hà n'obosara.
N'otu oge ahụ, flex3d nwere ọtọ modul maka profaịlụ ọnwụ , nke nwere ike bee n'akuku ígwè, ọwa nchara na H ekara ígwè, wdg
Na ọdabara ụdị laser ọnwụ tube
Standard ụdị (Emechiela ụdị)
Now tube, square tube, akụkụ anọ tube, elliptical tube, oval tube, D-ụdị tube, Triangle tube ...
Modular ụdị (Non-mechiri emechi ụdị)
Channel ígwè, U-ígwè, n'akuku ígwè, T-ụdị, H-ụdị, lath ígwè ...
Laser ọnwụ tube samples
Eriri Laser Pipe / tube Ịcha Machine ụzụ oke
Ịdị NO .: P2060 / P3080
pipe ogologo 6000mm / 8000mm
pipe n'obosara 20mm ~ 200mm / 20mm ~ 300mm
laser iyi IPG / nLIGHT eriri laser
Oke n'ọnọdu ọsọ 90m / min
Electric ike ọkọnọ AC380V 50 / 60Hz
Tube Laser Cutting Machine Ngwa Industry
Ngwá ụlọ, ngwaọrụ ahụike, mma akụrụngwa, mmanụ ngagharị, ngosi shelf, ugbo ígwè, àkwà mmiri, mbupu, Ọdịdị akụkụ, wdg
Tube Laser Ịcha Machine Ngwa ihe onwunwe
Gburugburu, square, akụkụ anọ, oval, n'úkwù gburugburu tube na ndị ọzọ na metal ọkpọkọ.
<< GỤKWUO banyere tube Laser Cutting Samples
Eriri laser ọnwụ metal ọkpụrụkpụ nke dị iche iche laser ike
Model Ee: gf-1530JH
1000W 1500W 2000W 3000W 4000W Fiber Laser Ịcha Machine maka Metal efere
A dịgasị iche iche nke ọrụ ma na mma arụmọrụ na eriri laser ọnwụ igwe! N'atu Kwụsie Laser Power 1KW 2KW 3KW 4KW eziga ...
Model Ee: gf-1530T / gf-1540T / gf-1560T
Model Ee: gf-2560JH / gf-2580JH